Olona 6 Avy eto Madagasikara Tokony ho Fantatrao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2013 22:15 GMT
Ao anatin'izao vanim-potoana politika mampisara-bazana eto Madagasikara izao (taorian'ny fifidianana iray volana lasa izay, ny fifidianana filoham-pirenena izay kasaina hotontosaina amin'ny 20 Desambra 2013), dia misy ireo olona vitsy izay hajain'ny olom-pirenena Malagasy tsy dia misy mitsipaka. Andao hojereetsika akaiky ireo olo-malaza maoderina enina izay nahavita zavatra teto amin'ity nosin'ny kaontinanta Afrikana ity.
Albert Rakoto Ratsimamanga [fr] no siantifka malaza indrindra avy eto Madagasikara. Nampalaza azy ny asany tamin'ny fahatakarana tsara kokoa ny kasingam-panasitranana ananan'ny zavamaniry tsy hita afa-tsy eto Madagasikara. Fantatra amin'ny famoahana voka-pikarohana siantifika manodidina ny 350 miainga amin'ny fiasan'ny taova ambonin'ny voa ka hatramin'ny fanafody natoraly manasitrana ny diabeta izy.
Nilaza toy izao izy momba ny fifaningoran'ny voary sy ny mponina Malagasy [fr]:
Mila mandroso araka ny figandontsika isika, mila matoky tena aloha amin'ny voalohany sy mahatoky ny fanasitranana vitan'ny voary (natiora). Satria iray ihany ny voary sy ny olombelona.
Amin'ity lahatsary amin'ny teny frantsay manaraka ity Ratsimamanga no manazava ny tenaben'ny asany sy ny fitiavany manao fikarohana:
Voamarika tamin'ny tafatafa :
(Ratsimamanga) dia nanompo ny tanindrazany tamin'ny fampitambarana ny fahalalana maoderina norantovina sy ny fahaizan'ny Malagasy mpanasitrana.
Tsara ihany koa ny milaza fa mbola ny atsasaky ny tantaram-piainany ihany ny zava-bitany teo amin'ny sehatra siantifika. Mpandray anjara lehibe tamin'ny hetsika hitadiavana ny fahaleovantena avy ao Frantsa tamin'ny maha-mpanorina ny Fikambanan'ny Mpianatra Malagasy (AEOM), fikambanana iray ain'ireo mpitari-dalana hiadiana tamin'ny fanajanahantany ihany koa izy.
Fonom-bokin'ny Tsiaron'i Gisèle Rabesahala avy amin'ny ocean editions CC-BY
Gisèle Rabesahala, Ilay tia tanindrazana
Iray amin'ireo mpitarika ny tolona hahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantenany i Gisèle Rabesahala. Sady mpanao gazety izy no mpikatroka politika nanangana ny gazety Imongo Vaovao. Izy ihany koa no vehivavy malagasy voalohany voafidy tamin'ny 1958 amin'ny maha-solontenan'ny filankevitry ny tanànan'Antananarivo, renivohitr'i Madagasikara azy. Nodimandry tamin'ny 2011 izy, ar heniky ny fanomezam-boninahitra azy ny aterineto tamin'izany fotoana izany.
Ny bilaogin'ny Gradiloafo nanamarika [fr] ireo asam-panampiana maro nataony sy ny fahazotoany teo amin'ny sehatra politika:
Teo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, Gisèle Rabesahala no mpanorina ny ONG “Fifanampiana Malagasy”, izay niasa hanampy ny tena fadinarovana (…] mpikatroka mafana fo hatry ny fahakeliny tamin'ny tolona hahazoana ny fiandrianan'ny fireneny, hita mandrakariva tamin'ny hetsiky ny tanora niray hina hanafaka ireo firenena teo ambany vahohon'ny fanjanahantany izy.
Jean-Luc Raharimanana, mpiambina ny Fahatsiarovana
Jean-Luc Raharimanana dia Malagasy mpanoratra. Taalohan'ny faha-20 taonany dia efa nahazo ny loka tamin'ny fifaninana tononkalo Jean-Joseph Rabearivelo tamin'ireo tononkalony taloha izy. Ny asa sorany dia malaza tamin'ny fahaizany manoritsoritra ny hatsaran-tarehin'ny voarin'ny tanindrazany, sy ny fahantrana sy ny mahafadiranovana, indrindra fa any amin'ireo tanànam-barìka. Ao amin'ny asa-sorany, ny angano sy ny finoanoam-poana taloha dia mifangaro amin'ny trangam-politika amin'izao vaninandro iainana izao.
Catherine Bédarida, mpitsikera literatiora avy ao Frantsa, nanoratra toy izao momba an'i Raharimanana sy ny bokiny “Nour, 1947″ [fr]:
“Nour, 1947″ ny bokin-tantara noforoniny voalohany, dia sady bokin-tantara nitranga, tantara am-bava, fitantarana an-tononkalo, pejy nokapkapohan'ny rivotra, ny riaka ny sira, ny rà. 1947, ilay taonan'ny fikomiana malagasy. Mahita ny fodian'ireo Malagasy mpiady, noraisina hiady tamin'ny ady lehibe faharoa, izay te-hanafaka ny ny fireneny amin'ny mpanjanaka ihany koa ny voanjo frantsay. Nahafatesana olona an'arivony ny fanenjehana [..] Nanoratra izy hoe, “Lasa ny teny ka namela antsika tsy hanana tsiaro”: ny hanangana indray ny tsiaron'i Madagasikara no faniriany fatratra
Erick Manana, Olomangan'ny Kolontsaina
Mpihira sy mpanoratra hira i Erick Manana ary nisy ny fotoana nanoritsoritana azy ho “Bob Dylan an'i Madagasikara”. Ny asany mahamatihanina azy teo amin'ny sehatry ny mozika dia nanomboka tamin'ny 1982 tamin'ny mahatao anatin'ny Lolo sy ny Tariny azy. Efa nahazo loka maro i Manana, ary nisehatra tao amin'ny fanaovan-danonana manantantaran'i Paris tao amin'ny Olympia ho fankalazana ny faha-35 taona nihirany tamin'ny 2013.
Uli Niebergall nanoratsoratra toy izao momba an'i Manana:
Manana's repertoire gracefully alternates between lyric ballads (e.g. “Tany niaviako”) and pop tunes with irresistibly wild and intricate rhythms (e.g. “Izaho tsy maintsy mihira”), and a grateful audience responds enthusiastically to every tone and syllable. Manana's lyrics often deal with the everyday life of Malagasy people. [..] Manana, however, doesn't limit himself to influences from his home country, but displays a distinct eclecticism in his choice of songs by other artists, both geographically and stylistically. For example, in reverence to Air Madagascar flying the distance between Paris and Antananarivo, he has remodeled “Amazing Grace” into a song called “Voron-tsara dia” (The plane that flies well). He sings a Malagasy version of Leonard Cohen's “Suzanne” which sounds surprisingly fresh.
Ny tahirin-kiran'i Manana dia nampifandimby ny hira milamindamina (oh: “Tany niaviako” sy ny hira malaza manana lantom-peo haingana sy sarotra fehezina (ohatra “Izahay tsy maintsy mihira”), ary mamaly izany amim- pientanentanana isaky ny lantom-peo sy vanin-teny ny mpihaino azy. Ny tononkiran'i Eric Manana matetika dia mifandray amin'ny fiainana andavanandron'ny vahoaka malagasy. Tsy mionona fotsiny ihany amin'ny hira vokatry ny tany anefa i Eric Manana, fa manana karazam-pitiavana maro eo amin'ny fifantenana ny hiran'ny artista hafa, na ara-jeografia izany na eo amin'ny karazany. Ohatra, ho fankasitrahana ny sidina ataon'ny Air Madagascar manelanelana an'i Paris sy i Antananarivo, dia namboariny indray ny “Amazing Grace” ho lasa hira antsoina hoe “Voron-tsara Dia”. Mihira ny dika amin'ny teny malagasy ny hiran'i Leonard Cohen mitondra ny lohateny hoe “Suzanne” amin'ny feo toy ny vaovao tokoa izy.
Here is a video of one of his most celebrated songs, “Izaho tsy maintsy mihira”:
Jacques Rabemananjara, ilay gadra politika
Jacques Rabemananjara dia mpanao politika malagasy, mpanoratra tantara tsangana sy poeta. Rabemananjara dia teraka tany an-tanànan'i Helodranon'i Antongil , morontsiraka atsinanan'i Madagasikara tamin'ny 1913. Rabemananjara dia nekena ho iray amin'ireo mpanoratra mavitrika indrindra tamin'ny Negritude [fr], hetsika ara-haisoratra sy ara-potokevitra narafitry ny manampahaizana mainty hoditra mpiteny frantsay iza nitsipaka ny fanavakavahan'i Frantsa Mpanjanaka. Senghor, ilay mpanoratra Senegaley izay lasa filoha, no mpitari-dalana tamin'ilay hetsika. Noahiahiana ho anisan'ny nandrisika ny Fikomian'ny Malagasy tamin'ny 1947 nanohitra ny fitondran'ny mpanjanaka tamin'ny 1947 izy, na dia fantatra aza fa nampitony ireo mpirotaka izy. Nosamborina sy nohelohina higadra mandra-pahafatiny miaraka amin'ny asa an-terivozona izy.
Ny bilaogy Green Integer nampahatsiahy ny zavabitany teo amin'ny fiainana:
Rehefa nandao ny sekoly Rabemananjara dia lasa mpanorina ny sendikan'ny mpiasam-panjakana malagasy voalohany, ary nanorina ny La Revue des Jeunes de Madagascar, gazety naneho ny fihetseham-pony nasionalista tsy azoazon'ny mpitondra frantsay, izay nanery ny gazety-boky, hampitsahatra ny fivoahany, rehefa nivoaka im-polo. Nandritra ny ady tany Frantsa dia nihaona tamin'ny vondron'ny mpikambana tao amin'ny negritude izy, izay nahitana an'i Léopold Sédar Senghor sy Alioune Diop, izay nandray anjara tamin'ny gazety Afrikana Présence Africaine. [..] Tamin'ny 1947, anefa, dia nanafika ny tobin-tafika Frantsay ny revolisionera malagasy. Namaly bontana tamin'ny famonoana na fandratrana Malagasy 80.000 ny manampahefana. Ary na dia tsy nisy aza ny porofo fa tafiditra tamin'izany ny antoko MDRM nisy azy, dia norahonana ho faty izy, noahiahiana nanomana ny fikomiana. Notsaraina izy, hita fa meloka, ary nohelohina higadra sy hanao asa an-terivozona mandrapahafatiny. Ny bokiny Antsa izay nivoaka tany Frantsa tamin'ny 1956, no nametraka azy ho maherifon'ny firenena, ary nampifanakaiky azy kokoa tamin'i Senghor sy Cesaire.
Rado, Ilay Poeta
Georges Andriamanantena [mg], fantatra kokoa amin'ny hoe Rado, poeta Malagasy malaza izay nodimandry dimy taona lasa izay. Eny nisedra vanim-potoana teo amin'ny kolontsaina malagasy ny sangan'asany, ary tafiditra amin'izany ihany koa ny tontolom-bilaogy Malagasy.
Georges Andriamanantena avy amin'ny pejy Facebook fanomezam-boninahitra azy. Nahazoana alalana
Rado dia taranaka mpitondra avy ao an-tanànan'i Amboanana any amin'ny faritra Itasy Itasy, fantatra ho foiben'ny mpitolona mahery vaika ho amin'ny fahafahana ka nanohitra ny fanjanahantany frantsay. Tebokaefatra, bilaogera malagasy avy eto Antananarivo, nanoratra [mg] momba ny fiavian'i Rado ho enti-manazava ny fitiavan-tanindrazany tsy azo hozongozonina:
Nanome lanja ny fahaleovantenany izy: na dia nisy aza ny fotoana nananany asa tsara karama, dia niala tamin'izany asa izany izy ka naleony nanangana ny gazetiny manokana izay nantsoina hoe Hehy niaraka tamin'ny rahalahiny Celestin. Namoaka bokin-tononkalo fito izy, ka ao anatin'izany ny Dinitra (1973), ny Voninkazo adaladala (2003) ary ny fiteny roa (2008). Maro amin'ny tononkalony no nisy nanisy feony izay nataon'ireo artista malagasy malaza. Maintikely, bilaogera Malagasy ao Cape Town, Afrika Atsimo, namoaka [mg] ny iray tamin'ny tononkalony. Indro ny sombiny:
Nandra anjara tamin'ity lahatsoratra ity i Mialy Andriamananjara.